Wasiirka Waxbarashada dowladda federaalka oo booqatay Galmudug – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiiradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Khadra Bashiir Cali ayaa booqasho ku tagtay magaalada Gaalkacayo, halkaasi oo soo kormeertey goobo waxbarasho oo ku yaalla qeybta Galmudug.
Waxaa wehlinayay wasiirka waxbarashada Galmudug Cabdiqaadir Maxamed Xaashi, waxayna wasiiradda u kuur galeysey xaaladda waxbarasho ee deegaanada Galmudug kadib socdaal ay kusoo martay Puntland.
Khadra Bashiir Cali ayaa sheegtay iney ku faraxsantahay iney aragto reer Galmudug oo dhistay goobo waxbarasho, waxeyna tiri “Horta aad baan ugu faraxsanahay in aan imaado iskool ay bulshada Galmudug isaga xilqaamto in ay iskool dhisato, oo ardaydii fasalkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare aan hadda u jeedo”.
“Waxaan rabaa in aan hadal yar u jeediyo dhalinyarada, dhalineed waa la idin maalgaliyey, idinkana waxaa la’idinka rabaa in aad wadanka wax u qabataan, maxay tahay marka hadafka la leeyahay, waxa uu yahay waxbarashada kaliya in aad idinka qaadatiin ma ahane, idinkana in aad wax dhiibtaan ayaa la’idinka rabaa, waxaan rajaynayaa in aad kuligiin leedihiin hadafyo aad rabtaan in aad gaartaan” ayay u sheegtay arday wax ka barata dugsi sare oo ku yaalla Gaalkacyo.
Cabdiqaadir Maxamed Xaashi, wasiirka waxbarashada Galmudug oo ka hadlay booqashada wasiiradda ayaa yiri “Markasta fikirkeeda waxa uu ahaa in waxbarashada la mideeyo, in wax barashada la tayeeyo, lana gaarsiiyo meel kasta oo dalka Soomaaliyeed ka tirsan, Khadrana waa wasiirkii ugu horeeyey oo heer federaalka ah oo waxbarasho oo timaada Galmudug”.
Khadra ayaa noqoneysa wasiiraddii ugu horeeysey ee waxbarasho oo heer federaal ah oo booqata deegaanada Galmudug muddo sanooyin badan ah.
Wasiir Kharda ayaa Garowe gaartay 12-kii bishaam March, iyadoo halkaas kulamo kula yeelatay wasiirka waxbarashada maamulka Puntland Cali Xaaji Warsame iyo mas’uuliyiin kale.
7-dii bishaan March, wasiir Khadra ayaa Muqdisho ku shirisay mas’uuliyiinta dalladaha Waxbarashada ee Ahliga ah waxeyna u sheegtay in sanadkan la mideynayo imtixaanka ardayda Shahaadiga, gaar ahaan kuwa from4-ka, laakin ma cadda in go’aankaasi gaari doono maamul goboleedyada dalka.